တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်သွယ်နေခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်ကိစ္စအပေါ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက် - European External Action Service
EEAS homepage > Myanmar (Burma) > တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်သွယ်နေခြင်းကို အဆုံးသတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့်ကိစ္စအပေါ် ထုတ်ဖော်ပြောကြားချက်
Yangon, 27/02/2018 - 12:20, UNIQUE ID: 180227_7
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်ကူးခြင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင်လုပ်ဆောင်နေသော အမြတ်အစွန်းများစွာရသည့် ရာဇဝတ်မှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်လာနေပါသည်။ ထိုသို့တရားမဝင်ကုန်ကူးခြင်းကြောင့် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများအပေါ်တွင် လွန်စွာဆိုးရွားသည့်သက်ရောက်မှုများရှိနေပြီး စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဖော်ဆောင်မှုနှင့် ဆင်းရဲမွဲတေမှုများအား တိုက်ဖျက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်လည်း အပျက်သဘောဆောင်သည့် သက်ရောက်မှုများရှိသည့်အပြင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများပါ ဆက်နွှယ်လာနိုင်သည့်အတွက် တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှုအပေါ်တွင်ပါ သက်ရောက်မှု များစွာရှိလာနိုင်သည်။ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်ကူးမှု ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။
မတ်လ (၃) ရက်နေ့ ၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် ကျရောက်မည့် ကမ္ဘာ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များနေ့အခါသမယတွင် ဥရောပသမဂ္ဂ၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများနှင့် ဥရောပသမဂ္ဂ၏လက်မှတ်ထိုးခန့်အပ်ခံထားရသူများဖြစ်သည့် ကျွန်ုပ်တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို မျိုးသုဉ်းလုနီးပါး အန္တရာယ် နှင့် ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရသည့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအား ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့် ကြိုးပမ်းမှု အပါအဝင် မြန်မာနိုင်ငံ၏အလွန်တန်ဖိုးရှိလှသော သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် ကြိုးပမ်းနေမှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဂုဏ်ပြုစကားပြောကြားလိုပါသည်။
တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်ကူးမှု ပပျောက်အောင် လုပ်ဆောင်ရန် ကျွန်တော်တို့အားလုံးတွင် တာဝန်ရှိပြီး ကျွန်တော်တို့အားလုံး ညီညီညွတ်ညွတ်နှင့်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ဥရောပသမဂ္ဂနှင့် ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှစတင်ကာ ပိုမိုထိရောက်သော ရလဒ်ကောင်းများပေါ်ထွက်လာစေရန် အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခြင်း ၊ ရှင်းလင်းလွယ်ကူသော ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာအခြေခံအုတ်မြစ်များ တည်ဆောက်ခြင်း၊ စသည်တို့မှတစ်ဆင့် တရားမဝင်ကုန်ကူးမှုများအား တိုက်ဖျက်ရန် အရှိန်မြှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါ သည်။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရသည် Biodiversity and Protected Areas ဥပဒေ အား ခိုင်မာစေရန် ကြိုးပမ်းခြင်း ၊ ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမည့် သဘာဝနယ်မြေ ၄၀ ကျော်အား တည်ထောင်ခြင်း ၊ ဆင်များနှင့်ကျားများကို ကာကွယ်ရေးအတွက် စီမံချက်များ ဖော်ဆောင်ခြင်း ၊ တောခေါင်းများကို လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးခြင်းနှင့် နေရာချထားခြင်း ၊ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများတရားမဝင်ကုန်ကူးမှုကို တိုက်ဖျက်နေသည့် အစိုးရ ဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်တန်းပေးခြင်း စသည်တို့အပါအဝင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ရေး နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများကုန်ကူးနေခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သည့် လုပ်ငန်းများအား ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။
သို့သော် ဆင်စွယ်အတွက် ဆင်များအမဲလိုက်သတ်ဖြတ်ခံရခြင်း နှင့် အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ချက် မြင့်မားလာသည့် ကြီးမားသည့်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ကို ကမ္ဘာအနှံ့တွင် ရင်ဆိုင်နေရပြီး မြန်မာနိုင်ငံတွင်လည်း ဆင်များ၏အရေပြားလိုအပ်ချက်ကြောင့် အမဲလိုက်သတ်ဖြတ်ခံနေရသည့် အခြေအနေသည် မကြုံစဖူးမြင့်တက်နေပြီး ယခုအတိုင်း ဆက်သွားမည်ဆိုပါက မကြာသောကာလအတွင်း ဆင်များမျိုးသုဉ်းသွားတော့မည်ဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် အဆိုပါအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကျွန်တော်တို့သည် ဤဘေးဒုက္ခကို ရပ်တန့်ပစ်ရန် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရအား အင်တိုက်အားတိုက် တိုက်တွန်းရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ အစိုးရကို ရန်ုကုန်မြို့ ၊ မန္တလေး ၊ ကျိုက်ထီးရိုး နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ နယ်စပ်တစ်လျှောက်၏ ဈေးကွက်များတွင် ဆင် နှင့် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောင်းချနေမှုကို ပိတ်ပင်ရပ်တန့်ပစ်ရန် တောင်းဆိုချင်ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ဈေးကွက်များတွင် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်များ၏ အစိတ်အပိုင်းများအား တရားမ၀င်ဆက်လက်၍ ရောင်းချခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်သဘာဝအား အလွန်စိုးရိမ်စရာအခြေအနေသို့ရောက်ရှိစေပြီး အခြားသောနိုင်ငံများ၏ ပြည်တွင်းဈေးကွက်များ ပိတ်လိုက်သည့်အတွက် ကမ္ဘာအလိုက် ပြည်နယ်အလိုက် တရားမ၀င်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန် ကုန်ကူးရောင်းချသော အဓိကဗဟိုချက်အဖြစ် ဖြစ်တည်၍လာသည်။ တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်တွင်းဆင်စွယ်ရောင်းချခြင်းဈေးကွက်အား ယခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလတွင် ပိတ်ချခဲ့ပြီး ဟောင်ကောင်သည်လည်း ဆင်စွယ်ကုန်ကူးခြင်းကို ပိတ်ပင်ရန် ကတိပြုခဲ့သည်။
တိကျမှန်ကန်သော အရေးယူမှု ၊ ကမ္ဘာလုံး သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ ပိုမိုပြင်းထန်သော ဥပဒေဘောင်ချမှတ်ခြင်းဖြင့် ထိရောက်သော ဖိအားပေးမှုဖြစ်စေခြင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံမှ ဤကဲ့သို့ တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်နှင့်ပတ်သက်သော ရာဇ၀တ်ကျူးလွန်မှုများကို အကြွင်းမဲ့သည်းခံနိုင်စွမ်းမရှိကြောင်းကို ရှင်းလင်းစွာထုတ်ပြန်ရပါမည်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်တိုဘာလတွင်ကျင်းပမည့် 2018 London Conference on Illegal Wildlife Trade ကို မြန်မာနိုင်ငံမှတက်ရောက်နိုင်ရန် နှင့် 2014 London Declaration on the Illegal Wildlife Trade တွင် ချမှတ်ခဲ့သည့် ၎င်း၏သံန္နိဋ္ဌာန်ကို ပြန်လည်ဆန်းသစ်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ရုံမက တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများ တရားမဝင်ကုန်သွယ်နေမှုအား တိုက်ဖျက်နေသည့် ဒေသတွင်းခေါင်းဆောင်နိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ် ၎င်း၏နေရာကိုရယူရန် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် မြန်မာအစိုးရကို တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ပစ္စည်းများတရားမဝင် ကုန်သွယ်နေခြင်းအား အရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုများပြုလုပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
H.E. Mr. Kristian Schmidt
H.E. Mrs. Eva Hager
H.E. Mr. Philippe Krikelka
H.E. Mr. Evgueni Stefanov Stoytchev
H.E. Mr. Demetrios A. Theophylactou
H.E. Mr. Jaroslav Doleček
H.E. Mr. Kreso Glavac
H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen
H.E. Mr. Olivier Richard
H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel
H.E. Mr. Pericles Boutos
H.E. Mr Peter Jakab
H.E. Mr. Mr. BRENDAN ROGERS
H.E. Ms. Ina Marciulionyte
H.E. Mr. Robert Lauer
H.E. Mr. Wouter Jurgens
H.E. Mr. Waldemar Dubaniowski
H.E. Mr. Franciso Vaz Patto
H.E. Mr. Bogdan Badea
H.E. Mr. Stanislav Opielą
H.E. Mr. Emilio de Miguel Calabia
H.E. Mr. Mr Staffan Herrström
H.E. Mr. Mr. Andrew Patrick
အီးမေးလ်လိပ်စာ : valerie.zirl@eeas.europa.eu
ဖုန်းနံပါတ် : ၀၉၂၆၁၁၄၉၀၉၈